နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် - Myanmar Network
Posted by phyothu on March 12, 2010 at 22:30
ယောက်ျားလေးအများစုမှာပညာအရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍work permit နှင်.s-pass ဆိုပြီးကွဲသွားပါတယ်။ work permit က
လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများလည်းပညာအရည်အချင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်များမရှိ၍work permit နှင်.ပဲလုပ်နေရသူများရှိပါတယ်။
အများစုကတော.သင်္ဘောကျင်းလိုမျိုး၊Engineering workshopတွေနှင်.private limited Engineering Sub Conတွေ
မှာရတာများပြီးHotel & Restaurantတွေမှာရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။၎င်းS-passရသူများကတော.MOMမှထုတ်ပေးတဲ.IPA
(In-Principle Approval )ကျပြီးမှလာသူတွေဖြစ်လို.ကိုယ်တိုင်လာရှာသူတွေထက်စာရင်Riskနည်းပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လာရှာသူ
The Straits Timesသတင်းစာနဲ.websiteတွေမှာကြော်ငြာထားတဲ.အလုပ်ကြော်ငြာတွေကိုကြည်.ပြီးကိုယ်နဲ.ကိုက်ညီတာကိုemail
Comment by zaw oo on December 6, 2013 at 10:49
ကျေးဇူးပါ သတင်းအချက်အလက်က လူတိုင်းရဲ့ဘဝတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
Comment by Nang Hla Kyi on March 10, 2012 at 15:51
Comment by oonphyo on December 20, 2011 at 15:57
Comment by Silly Fools on April 4, 2010 at 15:55
ကိုဖြိုးသူ အခုလို အချိန်ယူပြီး သိတာလေးတွေ ရှင်းပြပေးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်.
စင်ကာပူဆိုရင်တော့ ပွဲစားသတိထားပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်. တိုင်းတပါးလူမျိုးခြား တွေထက်တောင် မြန်မာအချင်းချင်း ကုတ်သွေးစုတ်တာတွေ ခဏခဏတွေ့နေရလို့ပါ.
မလေးရှားကတော့ အလုပ်သွားမလုပ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါ. (ကျွန်တော့် အမြင်ပါ)
ထိုင်းကတော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါတယ်. ထ်ိုင်းလိုပြောတတ်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့. တရားဝင် Passport နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိရင်တော့ singapore လောက် ဝင်ငွေမကောင်းပေမယ့် နေပျော်ပါတယ်.
Korea လဲ Professional လိုင်းကသွားရင် Korea လိုပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်. English က လုံးဝကို သုံးလို့ မရတာပါ။ ဝင်ငွေကတော့ singapore (၁)ဆခွဲလောက်များပါတယ်. အလုပ်ရဖို့လဲ ခက်ပါတယ်.
ဒီနိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာတွေ အတွက် အလုပ်ရှာရတာ အလွယ်ဆုံးကတော့ singapore ပါ. မြန်မာ community ကလဲတော်တော်ကြီးပါတယ်.
နိုင်ငံတွေကို ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ spending power လေးကို ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. ဥပမာ. singapore မှာ ဒေါ်လာ(၆၀၀)နဲ့ အခန်းဌားမယ်ဆိုရင် သာမန်အိပ်ခန်း ရမှာဖြစ်ပြီး bangkok မှာဆို ဒေါ်လာ(၃၀၀)နဲ့ condo မှာနေနိုင်ပါတယ်. korea မှာ ဒေါ်လာ(၆၀၀) နဲ့ဆို individual studio room ရနိုင်ပါတယ်.
တခြား Ozzie တို့၊ England တို့ကတော့ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့သူတွေ အတွက်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံပြောင်းတဲ့လူတွေများတာကြောင့် မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး
ဘယ်နိုင်ငံပဲ သွားသွား english တော့ကောင်းကောင်း ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်. နောင်ဆုံး ရဲတို့၊ လဝက တို့နဲ့ စကားပြောရရင်တောင် ကိုယ်က english လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ရင် အများကြီး အဆင်ပြေမှာပါ။
Comment by pyae phyo han on April 4, 2010 at 8:57
thanks you very much. give me about information. i want to go to Singapore but i don't know about Singapore.
Comment by sailinn on March 17, 2010 at 17:40
Comment by snow on March 17, 2010 at 17:32
Comment by phyothu on March 17, 2010 at 8:11
ok,,I am not so sure details for that field because it is from out of my professional. I'd like to suggest u for your first step. Go and check in www.st701.com and www.jobdb.com for related position and they will mention about requirements and job scope. From there atleas u will know some facts, i believe that. Actually i didn't see those mining job title before.
Comment by sailinn on March 16, 2010 at 17:19
thank for your kindness, if i want to work like geologist without agency (from myanmar) in singapore so what can i do for first step? honestly i want to know what kind of work for geologist there according to i've only mining experience in myanmar.
Comment by phyothu on March 15, 2010 at 15:16